Waancaa Addunyaa FIFA 2018 - BBC News Afaan Oromoo
Adeemsuma keessa haalli bittaafi gurgurtaa jijjiramuun sadarkaa amma addunyaan irratti argamtu irra qaqqabee. Haaluma kanaan wl qabateenis adeemsii daldalaa kirpto karansii to'annaan alaa ballinaan gaggeeffamaa akka jiru himama. Haalonni waa'ee kirpto karansii irratti hubachu qabnu maal fa'ii?
Moodriich olaantummaa Meesiifi Roonaaldootti daangaa tolche
Taphataan sarara gidduu Riyaal Maadriidiifi Kirooshiyaa Lukaa Moodriich olaantummaa Meesiifi Roonaaldo waggoota 10'f turetti daangaa tolche.
Taphataan lammii Kirooshiyaafi garee kubbaa miilaa Riyaal Maadiriid kan ta'e Luukaa Moodirich badhaasa taphataa cimaa bara kanaatiin mo'ateera. Garee taphattoota cimaa dubartootaatiin ammoo lammii Biraazil Maartaan mo'atteetti.
Mesut Ozil: Utubaan Arsenaal ammaan booda Jarmaniif taphachu hin barbaadu jedhe
Utubaan Arsenaal Mesut Ozil ammaan achi tapha idil-addunyaa Jarmaniif taphachuu hin barbaadu jedhe.
Simannaa gootummaa garee kubbaa miilaa Faransaayiif
Gareen kubbaa miilaa Firaansi Waancaa Addunyaa bara 2018 mo'atan Paarisitti deggertoota kuma hedduutiin simannaan ho'aafi seena qabeessa ta'e taasifameeraaf.
Xumura Waancaa Addunyaa Raashiyaatti gaggeeffamaa jiruuf darbuuf Faransaay har'a Beeljiyeem waliin falmii cimaa taasisfti. Hiriyootni lamaan Lukaakuu fi Poogbaan masaanuu tahuun biyyasaanii bakka bu'uun dorgommii taasisu.
Pireezidantiin Fraans Imaanu'eel Maakroon taphaattootni garee biyyolessaa isaanii Afrikaanota waan ta'aniif biyyootni Afrikaa garee isaanii akka deeggaran gaafatan.
Paablo Zaabaaletaan ani rakkina garee Arjentinaa keessatti uumame beeka jedhe.Kunis Mesii gammadee taphatu bara 2012 qofan arge jedhe.
Waancaa Addunyaa 2018: Waancaan Addunyaa maaliif Mesiitti garaa jabaate?
Arjentiinaan taphatoota ciccimoo addunyaa hedduu qabaattus Waancaa Addunyaa Raashiyaa kana keessaa yeroodhaan bahuu dandeessi.
Waancaa Addunyaa 2018: Aarsaa ajaa'ibaa deggartoonni Peeruu kaffalan
Garee kubbaa millaa isaanii Raashiiyaatti argamanii deeggaruuf lammiileen Peeruu heeddumminaan imala ajaa'ibsiisaa taasisaniiru.
Waancaa Aduunyaa 2018: Deeggartootni Meeksikoo sochii lafaa uumaniiruu?
Deeggartootni Meeksikoo Waancaa Addunyaarratti ijifannoo biyyi isaani Jarman irratti goonfatte wayita ibsan sochii lafaa nam-tolcheen uumamuu saayintistoonni himan.
Kooriyaa Kibbaa: Leenjisaan garee faallaa walii-wallaalchisuuf uffata taphatootasaa wal jijjiire
Leenjisaan Kooriyaa Kibbaa garee faallaa taphatoota isaanii adda baasuu hin dandeenye ittuu walii wallaalchisuuf, lakkoofsa uffata taphaa kan taphatoota isaanii wal jijjiruu hime.
Waancaan Addunyaa 21ffaan sa'aatiiwwan muraasaan dura magaalaa guddittii Ruusiyaa, Moskootti haala ho'aa taheen jalqabameera. Taphni jalqabaas Ruusiyaa fi Saawudii Arabiyaa gidduutti taphatameera.
Waancaa Addunyaa 2026: Kanaadaa, US fi Meksiikoon walta'un qopheessuufi
Yunaayitid Isteet, Kanaadaa, fi Meksikoon waancaa addunyaa 2026 qopheessuuf filataman.
Qaama kubbaa miilaa addunyaa bulchu FIFA fi kalaqxoota wantoota dirreerratti biifamuun sarara baasanii giduutti waldhabdeen uumameera. Qaamota kunneen lameen gidduu walii galteen abbaa qabeenyummaa fi kaffaltiirratti hin jiru.
Raashiyaa yoo deemtan kolfa keessan qabadhaa! Poolisiin isin qabuu danda'a
Lammileen Raashiyaan waan hin seeqneef hiriyyoomfachuun ni ulfaata jedhama
Kubbaa Miilaa 2018: Dhimmoota 7 beekuu qabdan
Dhuguma Jarmaniin hagas mara rukuttaa penaalitiin gaariidhaa? Dirree ofiirratti tabachuun hangam bu'aa qaba?
Gantoota Tapha Kubbaa Miilaa: Salphina abbootii murteefi qondaaltota kubbaa miilaa Afriikaa
Qondaaltonni kubbaa miilaa Lixa Afirikaafi Keenyaa dhibba tokkoo ol ta'an osoo qarshii fudhachaa jiranii dhoksaatti kaameraan waraabameen saaxila ba'an
Waancaa Addunyaa Raashiyaa 2018 eenyu akka mo'atu sirriitti tilmaamuu dandeessuu? Marsaa jalqabaarraa eenyutu tara? Tilmaamaatii qoodaa.
Raashiyaan Waancaa Addunyaa 21ffaa gaggeessuuf Istaadiyeemota 12 qopheessiteetti. Isaan gurguddoo kam fa'i?